सलमान खान र अक्षय लाई पछि पार्दै, भारतकै सबैभन्दा महंगा अभिनेता बने साउथ स्टार प्रभाष , कति लिन्छन पारिश्रमिक ? —
सलमान खान र अक्षय लाई पछि पार्दै, भारतकै सबैभन्दा महंगा अभिनेता बने साउथ स्टार प्रभाष , कति लिन्छन पारिश्रमिक ?
८ मंसिर २०७८, बुधबार ०९:५१ admin
काठमाडौं : साउथ स्टार प्रभाष भारतकै महंगा अभिनेता बनेका छन् । फिल्म बाहुबली बाट चर्चामा आएका उनलाई फिल्मको कमी छैन । उनलाई फिल्मको अफरहरु आइरहेको हुन्छ ।
फिल्मको अफर जति आएपनि उनी भने आफुलाई सुहाँउदो फिल्मलाई एसेप्ट गर्छन् । फिल्म बाहुबली बाट नै विश्वभर चिनिएका प्रभाष अहिले भारतकै ठुलो स्टार भएका छन् । उनी भारतकै महंगो अभिनेतामा पनि गनिएका छन् ।
अहिले उनी फिल्महरु राधे श्याम, सालार, आदिपुरुष , स्प्रिट बाट चर्चामा छन् । उनले सन्दीप रेड्डी वांगाको फिल्म ‘स्प्रिट’मा महंगो पारिश्रमिक लिएपछि बढी चर्चामा आएका छन् । भारतिय मिडियाका अनुसार उनले यस फिल्ममा १ सय ५० करोड रुपैंयाँ पारिश्रमिक लिएका छन् ।
यसअघि प्रभाषले फिल्म ‘आदिपुरुष’मा पनि १ सय ५० करोड लिएका थिए । बलिउडका कुनै पनि अभिनेताले अहिलेसम्म १ सय ५० करोड पारिश्रमिक लिएको चर्चा छैन ।
सलमानले पनि अहिलेसम्म एक सय करोड भन्दा बढी पारिश्रमिक लिएका छैनन् । यस्तै अक्षकुमारले पनि एक सय करोड भन्दा केही बढी मात्र पारिश्रमिक लिएका छन् ।
यो पनि पढ्नुहोस !अक्षय र क्याट्रिना स्टारर् ‘सूर्यवंशी’ले १८ दिनमा कति कमायो ?
काठमाडौं । अक्षय कुमार र क्याट्रिना कैफ स्टारर् फिल्म ‘सूर्यवंशी’ले बक्स अफिसमा दबदबा कायमै राखेको छ । रिलिज भएदेखि नै कमाईको हिसाबले यो फिल्मले गति लिइरहेको छ । अब चाँडै नै यो फिल्म २०० करोडको क्लबमा सामेल हुने भएको छ ।
‘सूर्यवंशी’ रिलिजमा आएको १८औं दिनमा पनि राम्रो कमाई गरेको छ । तरण आदर्श र बक्स अफिस इन्डियाले दिएको जानकारी अनुसार फिल्मले आइतबार पनि ५ करोडभन्दा बढीको कमाई गरेको छ ।
‘सूर्यवंशी’ले आइतबार ५.३३ करोड कमाएको छ । योसँगै फिल्मको कुल कमाई १७८ करोडभन्दा माथि पुगेको छ । अब चाँडै नै अक्षय र क्याट्रिनाको यस फिल्मले २०० करोडको आँकडा पार गर्ने आँकलन गरिएको छ ।
दीपावलीको अवसर अर्थात् नोभेम्बर ५ मा ‘सूर्यवंशी’ दर्शकमाझ रिलिजमा आएको थियो । सूर्यवंशी भारतभर कुल ४ हजारभन्दा बढी स्क्रिनमा रिलिज गरिएको छ, भने विश्वभर ५२०० स्क्रिनमा रिलिज गरिएको छ ।
रोहित शेट्टीको निर्देशनमा तयार भएको यो फिल्ममा अक्षय र क्याट्रिनाको साथमा सिंघम अजय देवगन र सिम्बा रणवीर सिंहको अभिनय रहेको छ ।
भारतमा एक शिक्षकले बनाए आफ्नी श्रीमतीका लागि सानो ताजमहल, चौतर्फी चर्चा
‘आदिपुरुष’का लागि प्रभासको परिश्रमिक १५० करोड भारु?